Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Qarax gaadhi oo maanta ka dhacay Naxaaxiga Xaawo Taako ee magaalada Muqdisho.
Goobjoogayaal ayaa sheegaya in gaadhiga qarxay uu markii hore ka yimid dhanka Koontaroolka Wadada Godka Jilacow, Kaasi oo la dhigay maqaayad ku taal wadada dhinaceeda, waxaana qaraxa sababay dhimashada ilaa 2-Ruux iyo dhaawac kale.
Goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa ah meel ammaankeeda aad loo ilaaliyo waxaa ku yaala maqaayado, goobo ganacsi iyo Hotelka Xaawo Taako.
Labada dhinac ee wadada hormarta waxaa ku yaalla koontaroolo laga ilaaliyo ammaanka, sida Koontaroolka Tiyaatarka Qaranka ee ay ku sugan yihiin Ciidamada Milateriga Ilaalada Madaxtooyada iyo Koontaroolka dhanka Wadada Godka Jilacow hormarta oo ay ku sugan yihiin Ciidamada Nabadsugida.
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda qaraxa, waxaana intaa ku dartay inay qarxiyeen mid ka mid ah Koontaroolada laga ilaaliyo Madaxtooyada, waxaana horay uga dhacay qaraxyo dhowr ah.
waraysi/ siyaasi cabdullahi ciilmooge xirsi /amniga dalku waa masuuliyad saaran dowlada iyo d/goboleeda,jubaland waxay u baahan tahay isbedel(golaha1960)
COL;CAARE OO SOO DHOWEYN USAMEEYEY KU XIGEENKIISA COL;GAMAAL BAAXAD xarunta jabhada xoraynta s/land